Shirka Buurmadow Cid Hor Istaagi Karta Ma Jirto”Shabeel | Warmaalnews.com
Shirka Buurmadow Cid Hor Istaagi Karta Ma Jirto”Shabeel
Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac Shabeel) ayaa sheegay in aanay jirin cid baajin karta shirka beelaha reer Burco qabsanayaan ee Boqor Buurmadow iclaamiyay. Waxa uu sheegay in haddii bulshooyinkaasi isku afgartaan shirka uu qabsoomayo lagagana arrinsan doono aayahooda.
Beel kastaaba wey shirtaa, oo danaheeda iyo arimaheeda ayey ka shirtaa, Beel iyo laba Beelood iyo in ka badana dantooda iyo arimahooda wey ka shiri karaan, dambina maaha inay Beeluhu arimahooda iyo danahooda ka shiraan, Shirkan Boqor Buurmadaw iclaamiyeyna maaha dambi, cidina ma joojin karto, haddii labada Beelood isku af gartaan oo ay ka heshiiyaana wuu qabsoomaya,” sidaas ayuu yidhi Mr Shabeel oo wargeyska Geeska Afrika u warramay.
Boqor Cismaan Buurmadow ayaa dhawaan sheegay in ay dib u habayn ku samaynayaan siyaasadda beeshiisa ee dhanka isbahaysiga siyaasiga ah, islamarkaana ay is laabxaadhanayaan beelaha ay Burco wada degan yihiin laakiin, shirkaasi waxa si weyn uga cadhootay xukuumadda. Inta badan masuuliyiinta xukuumadda ee ay isku hayb yihiin Buurmadow ayaa shirkaasi deedafeeyay waxaanay ugu dambeyn xukuumaddu sheegtay in Buurmadow ciidamo uu leeyahay u tallaabiyay dhanka Puntland.